အနီရောင်ကော်ဇောပွဲများ မှစ. ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားစန်ဒရာဂလ၏ပုံများ
ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှတစ်ကောလိပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးနောက်ဂျာမန်ဂေါက်သီးဂလသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအောင်ပွဲ 2011 ခုနှစ် LPGA Kia ဂန္ထဝင်မှာဖြစ်ပျက် 2008 ခုနှစ်တစ်ဦးလူသစ်အဖြစ် Q-ကျောင်းမှတဆင့် LPGA Tour ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
စန်ဒရာဂလ (ညာ) နှင့်မော်ဂန် Pressel 2014. ဆမ် Greenwood / Getty Images အတွက် Rolex Player ကိုဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအတွင်းအနီရောင်ကော်ဇောပေါ်မှာရှိုး
စန်ဒရာဂလနှင့်မော်ဂန် Pressel အဆိုပါ LPGA ရဲ့နှစ်ပတ်လည် Rolex ဆုပေးပွဲညမှာအနီရောင်ကော်ဇောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အင်တာဗျူးအဖြစ်စုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဖြစ်ရပ်တစ် webcasts ဘို့နှုတ်ဆက်နဲ့သူချင်းကစားသမားများနှင့်အခြားဂေါက်သီးရာထူးဂုဏ်ရှိန်ပြောပြရန်ရှိနေသေးသည်။
Zippy ဂေါက်သီး Dress အတွက် Play pose
ပြခန်းစန်ဒရာဂလတစ်ပျြောကြာစန်ဒရာဂလစွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots မတိုင်မီ 2014 ခုနှစ်တည်ထောင်သူများဟာ LPGA Tour အပေါ်ဖလားမှရှိုး။ ဧဇရကို Shaw / Getty Images
ဒါက 2014 ခုနှစ်မတိုင်မီ LPGA ရဲ့တည်ထောင်သူများဖလားတစ်ခုရိုက်ကူးကာလအတွင်းအဆိုပါမီးခိုးရောင်အဖြူရောင်, အနက်ရောင်နဲ့ပန်းရောင်မတ်မတ်ယူစန်ဒရာဂလဒီဓာတ်ပုံထဲမှာကာမဂုဏ်ဖြစ်ပါတယ်အလွန် "zippy" ဂေါက်သီးစားဆင်ယင်, ယ့်တစ်ဇစ်ကဲ့သို့ပုံစံပါရှိပါတယ်။ သူမဒီမတ်မတ်မရွေး, သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမ၏ပြုံး pose အပေါ်အခြေခံပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းအခါဂလတစ်ပျြောခံစားချက်အတွက်ပါပြီရပါမည်။
စန်ဒရာဂလ 2012 Evian Gala
မဿဲ Lewis က / Getty Images
အဆိုပါ LPGA Tour ပြင်သစ်သွားရောက်လေ့လာတဲ့အခါမှာ, ထိုကြောင့် Evian မာစတာမှာ Gala ဧည့်ခံဘို့အချိန်ကိုဆိုလိုသည်။
Rolex Reception မှာစန်ဒရာဂလ
စန်ဒရာဂလ 2011 ခုနှစ်ဆမ် Greenwood / Getty Images အတွက် LPGA Rolex ဆုပေးပွဲ Reception မှာဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ဖြစ်စေ
နှစ်စဉ် LPGA Tour ထိုကဲ့သို့သောတစ်နှစ်တာ၏တစ်နှစ်တာနှင့်လူသစ်၏ Player ကိုအတိုင်းခရီးစဉ်ရဲ့ကစားသမားဆု, တင်ပြရာသီရဲ့အဆုံးမှာတစ်ဆု Gala ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ 2011 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ် Gala အဆိုပါခရီးစဉ်ရဲ့ထိပ်တန်းစပွန်ဆာတစ်ဦးအဘို့အမည်ရှိနှင့် Rolex Reception ကိုခေါ်ခဲ့သည်။
ထိုအစန်ဒရာဂလအတွက် honorees အကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂလတစ်ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူမဟာဒီတော့ Rolex Reception မှာ, သူမရာသီကနေအခြား Rolex ပထမဦးစွာအချိန် Winners နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် 2011 ခုနှစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ LPGA Tour အပေါ်အနိုင်ရခဲ့ပေ။
Evian Gala မှာစန်ဒရာဂလ
ပြင်သစ်တွင် 2011 ခုနှစ် Evian မာစတာပြိုင်ပွဲမှာတတိယပတ်ပတ်လည်တွင်အောက်ပါတစ် Gala ညစာတက်ရောက်စဉ်စန်ဒရာဂလတစ် pose ရိုက်။ စတူးဝပ် Franklin / Getty Images
စန်ဒရာဂလပြင်သစ်တွင် 2011 ခုနှစ် Evian မာစတာ၏တတိယပတ်ပတ်လည်တွင်အောက်ပါတစ် Gala ညစာမှာဓာတ်ပုံဆရာတစ် pose ရိုက်။ ဂလအစောပိုင်းကသောနေ့၌သင်တန်းအပေါ်တစ်ဦးအသက် 76 ပစ်သတ်ပေမယ့်တက် glammed တဲ့ထံမှသူမ၏ရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ Gala အဆိုပါ Evian မှာအစဉ်အလာဖြစ်ပြီး, များသောအားဖြင့်တတိယပတ်ပတ်လည်အောက်ပါအတိုင်း။ ဂလ 1-ကျော်တန်းတူ 289 မှာပြိုင်ပွဲပြီးဆုံး။
စန်ဒရာဂလ LPGA ဓာတ်ပုံရိုက်
စန်ဒရာဂလ 2009 LPGA Tour Championship ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဘို့ဖြစ်စေ။ Scott Halleran / Getty Images
စန်ဒရာဂလတစ်ခု LPGA ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးသည်ခရီးစဉ်ကိုရွေးချယ်ကစားသမားနှင့်အတူတစ်နှစ်အများအပြားပြိုင်ပွဲမှာလုပ်ဖို့ likes တစ်ခုခုစဉ်အတွင်းအထက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်ဤဓာတ်ပုံကြောင့်မပြောနိုင်ပေမယ့်, ဂလအမျိုးသမီးဂေါက်သီးအတွက်အမြင့်ဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် 6-ခြေလျင်ဂျာမန်ရဲ့ - ဒါပေမယ့်သူမဟာဂေါက်သီးဘောလုံးကိုတစ်ဦး boomer မဟုတ်ဘူး, သူမတစ်ဦး finesse ကစားသမားပိုပါပဲ။
စန်ဒရာဂလ၏ "Wilhelmina 7" ဓာတ်ပုံကိုအညွန့်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်ဖြစ်စေ။ Wilhelmina အဆိုတော်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Courtesy; ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့
တစ်ဦးရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်ဂေါက်သီးစန်ဒရာဂလ၏ဤဓာတ်ပုံကိုကို "အဘို့ဓာတ်ပုံကိုအညွန့်နေစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် Wilhelmina7" စီမံကိန်း။
နောက်ကျောကို 2008 ခုနှစ်, အကမ္ဘာကျော် Wilhelmina မော်ဒယ်အေဂျင်စီခုနစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးသမီးတွေဂေါက်သီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်အလှအပ icon များကဲ့သို့သောသူတို့အားဂေါက်သီးစျေးကွက်မှအစီအစဉ်များကိုကြေညာခဲ့သည်။ ဂလ၏ "Wilhelmina 7. " ၏တစျခုဖွစျသညျ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါစီမံကိန်းကိုချွတ်ယူခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်သူတို့အားခုနစ်ခုဂေါက်သီးမျိုးစုံဓာတ်ပုံကိုအညွန့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူကိုပြု၏။
စန်ဒရာဂလနှင့်ဗစ်ကီ Hurst, အပိုင်းငါ
ဗစ်ကီ Hurst (လက်ဝဲ) နှင့်စန်ဒရာဂလစင်္ကာပူအတွက် 2010 HSBC ကအမျိုးသမီးချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာကြိုဆိုဧည့်ခံနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရပ်တန့်။ Ross က Kinnaird / Getty Images
နှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဦးစလုံးထို့နောက် (ကကောလိပ်ဂေါက်သီးကဲ့သို့အငယ်တန်းဂေါက်သီး, ဂလအဖြစ် Hurst) ဖလော်ရီဒါအတွက်ဂေါက်သီးကစားတဲ့အခါမှာဂေါက်သီးစန်ဒရာဂလနှင့်ဗစ်ကီ Hurst မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်ချိန်တည်းပတ်လည် LPGA Tour ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီပြခန်းနှစ်ခုဓာတ်ပုံများမှာသူတို့ကိုကြည့်ပါ။
အထက်, Hurst နှင့်ဂလစင်္ကာပူအတွက် 2010 HSBC ကအမျိုးသမီးချန်ပီယံပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားဂေါက်သီးများအတွက်ကြိုဆိုဧည့်ခံစဉ်ကာလအတွင်းရှိုး။ Hurst buzzworthy ကြည့်နဲ့ဂလ '' အနီရောင်ဝတ်စုံ rockin ဖြစ်ပါတယ်။
စန်ဒရာဂလ LPGA ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား
စန်ဒရာဂလ 2008 ခုနှစ်ယောနသန်သည် Ferrey / Getty Images အတွက်ဖြစ်စေ
စန်ဒရာဂလ၏အထက်တွင်ပုံရိပ်ကိုမတိုင်မီ Safeway အင်တာနေရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း 2008 ခုနှစ်တွင်သိမ်းယူခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 2008 LPGA Tour အပေါ်ဂလရဲ့လူသစ်ရာသီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှအောင်မြင်သောကောလိပ်ဂေါက်သီးကြီးနှင့်ဥရောပထဲမှာထိပ်တန်းအဆင့်အပျော်တမ်းအမျိုးသမီးတွေဂေါက်သီးများထဲမှမတိုင်မီကကြောင်းဂလမှ 2007 ခုနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာ Q-ကျောင်းကတဆင့်သွားသဖြင့်သူမ၏ခရီးစဉ်ကဒ်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ LPGA အပေါ်သူမရဲ့ပထမသုံးရာသီအစိုင်အခဲပေမယ် unspectacular ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ဂလ, ဂျာမနီ၏ဇာတိ, 2011 LPGA Kia ဂန္ထဝင်မှာသူမ၏ပထမဆုံးအောင်ပွဲများအတွက်မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စန်ဒရာဂလက Black Dress
စန်ဒရာဂလ 2010 Evian မာစတာမှာဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းတစ်အနက်ရောင်ဝတ်စုံအတွက်ဖြစ်စေ။ စတူးဝပ် Franklin / Getty Images
အနက်ရောင်ဝတ်စုံအတွက်စန်ဒရာဂလ၏ဤပုံရိပ်အခြား LPGA ပြိုင်ပွဲဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးရာမှဖြစ်ပါတယ်။ ဂလစိမ်းလန်းဥယျာဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်သောအရာကို၌စိုက်နေသည်ကိုကြောင့်အဝတ်အစားအတွက်ဖော်ပြပေးအဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးအနည်းငယ်ပိုမိုခေတ်မီဖြစ်ခဲ့သည်။ ပဲရစ်မှာ - ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်ပုံ Evian မာစတာစဉ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကွောငျးသင်ယူဖို့သငျသညျမအံ့သြပေလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Mojo6ပါတီမှာစန်ဒရာဂလ
ဂျာမဏီ၏စန်ဒရာဂလဧပြီအတွက်ဂျမေကာမှာရှိတဲ့ Mojo6Kick-Off ပါတီအတွင်းမှာတစ်ဦးဓာတ်ပုံ LPGA များအတွက် 2010 ခုနှစ်ကီဗင် C. ကော့ / Getty Images အဘို့ဖြစ်စေ
အထက်, စန်ဒရာဂလ 2010 ခုနှစ် Mojo6kickoff ပါတီများအတွက်သူမ၏ ensemble ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် backless ထိပ်တန်းကျီ။
အဆိုပါ Mojo6ဘာလဲ ဒါဟာလို့ချေါတဲ့ပုံစံကို အသုံးပြု. ဂျမေကာကစားခဲ့သည့် 2010 LPGA အချိန်ဇယားတခုတခုအပေါ်မှာတရားမဝင်ပြိုင်ပွဲခဲ့ "Raceway ဂေါက်သီးရိုက်။ " အဲဒီပုံစံကိုဂေါက်သီးခြောက်ပေါက်ကိုကစားပွဲများကစားကွင်းခတ်မှတဆင့်တိုးတက်ပါဝင်ပတ်သက်။
ဂလအမှန်တကယ်ပြိုင်ပွဲသူ့ဟာသူအတွက်မကစားခဲ့ပါဘူး - လယ်ပြင် 16 ဂေါက်သီးကန့်သတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမပါတီမှဖန်ဆင်း!
စန်ဒရာဂလနှင့်ဗစ်ကီ Hurst II ကို
စန်ဒရာဂလနှင့်ဗစ်ကီ Hurst (ညာ) ကို LPGA များအတွက် 2010 ခုနှစ်ကီဗင် C. ကော့ / Getty Images အတွက် Mojo6ပြိုင်ပွဲများအတွက်ကန်-ချွတ်ပါတီမှာ "အနီရောင်ကော်ဇော" ပေါ်တွင်ရှိုး
ဤသည်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဗစ်ကီ Hurst နှင့်အတူနိုက်စန်ဒရာဂလ၏ဤပြခန်းထဲမှာဒုတိယပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်, သူတို့က 2010 ခုနှစ်ကဂျမေကာမှာရှိတဲ့ Mojo6ပြပွဲပြိုင်ပွဲများအတွက် kickoff event မှာရှိုး။
အိုဂလမဟုတ်သလို Hurst မအမှန်တကယ်အဘယ်သူ၏လယ်ကွက် 16 မှအွန်လိုင်းမှမဲပေးဖြစ်စဉ်ကိုကောက်ယူနေစဉ်ထိုလယ်၌တစျခုမှာအစက်အပြောက်ပရိသတ်တွေနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပါဝင်သူကို select ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့သည်ကန့်သတ်ခဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ဂလနှင့် Hurst နှစ်ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးများအတွက်မဲဆွယ်သော်လည်း, Beatriz Recari ကအနိုင်ရတဲ့အထိအနာ။
ဒဏ်ရာနှင့်ခွဲစိတ်၏က Tiger Woods '' Long ကသမိုင်း
အာနိုး Palmer က: 'ဘုရင်' '၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Horton ကစမစ်: 1st မာစတာချန်ပီယံ, ရေနစ်မြုပ်၏ခန်းမ
Pro ကိုဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား Ricky မုဆိုးကဘယ်သူလဲ
နာတာလီ Gulbis အတ္ထုပ္ပတ္တိ
က Tiger Woods '' အလုပ်ရှာဖွေရေးဝင်ငွေ: အဆိုပါဒေါ်လာဘီလျံဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား
အတှကျလညျး Nordegren ရုပ်ပုံများ
သူကတစ်ဦး Scratch ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဖြစ်လာသည့်အခါမည်သို့ဟောငျးက Tiger Woods ခဲ့သလား
8 ဂရိတ် Rita Hayworth, Movies
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Fisher ကန့်ဟေးလ်၏တိုက်ပွဲ
နေ့စဉ်အဘိဓါန် Mandarin- သင်ခန်းစာ: တရုတျထဲတွင် "ခရီးသွား"
လူသေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ: Teotihuacan ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောဓမ္မရာဇဝင် - တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထိပ်တန်း 15 ဖရန့် Sinatra သီချင်းများ
ပုံစံများဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ကိုယ်တော်၏ကလေးသူငယ်ရန်စီရန်
'' Reír 'နဲ့' Reírse '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ထိပ်တန်းပြင်သစ်သင်ယူဆော့ဝဲ Programs ကို
ရှိမုနျကို Boccanegra ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
Valence သို့မဟုတ် valence ဆိုတာဘာလဲ
Randy Travis '' ဘုနျးတျောကိုရထား - ယုံကွညျခွငျးသီချင်းများ, ကိုးကွယ်မှု & ချီးမွမ်း ''
Visual Basic အတွက် Process.Start အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS Indiana ပြည်နယ် (BB-58)
Themis - တရားရေးနတ်ဘုရားမ